Kulabo bafuna ixesha elifanelekileyo, i-karaoke ilungile apho kunye nezinye izihlandlo ezidumile ezifana ne-bowling, ibhilididi kunye nokudansa. Nangona kunjalo kwakusandul 'ukukhawuleza kwinqanaba lekhulu leminyaka ukuba ingqungquthela iqalile ukufikelela kwi-US
Kwakuyimeko efana neYapan, apho umshini wokuqala wesikolo waseKorea wasungulwa kwiminyaka engama-45 edlulileyo. Ngoxa amaJapan ayenandipha ukuzonwabisa ngeendwendwe zeendwendwe ngokuhlabelela iingoma, ingcamango yokusebenzisa ibhokisi ye juke elaliyidlala imvelaphi yangemuva, kunokuba ibhendi ephilayo, yayibonakala ingaqondakali.
Ingathethi ukuba ukukhetha ingoma yayilingana nexabiso lokutya ezimbini, ixabiso elincinci.
Nangona imbono ngokwawo yazalwa ngaphandle kweemeko ezingavamile. Umqambi waseJapan uDaisuke Inoue wayesebenza kumaziko eefafesi njengomculi wokugcina umgcini xa umceli ecelwa ukuba ahambe naye ekutyeleleni ukuba abone oogxa bezoshishino. "UDaisuke, umdlalo wakho webhodibhodi ngumculo kuphela onokuyicula! Uyazi ukuba ilizwi lam liphi kwaye lifuna ukuliva kakuhle, "umthengi wamxelela.
Ngelishwa, uDaisuke akakwazanga ukwenza uhambo, ngoko wenza into elandelayo eyona nto kwaye wanika umthengi ngokurekhoda ngokwezifiso zakhe zokudlala. Kuyacaca ukuba yasebenza ngoba xa umthengi ebuyile wacela ezinye ii-cassette. Yilapho iphefumlelwe. Wagqiba kwexesha emva kokuba akhe umatshini nge- microphone , isithethi kunye ne-amplifier edlalwa ngumculo abantu banokucula.
Umshini weComber uveliswa
U-Inoue, kunye nabahlobo bakhe bezobuchwepheshe, baqala ukuqokelela iimishini ezili-8 ze-Juke, njengokuba bebizwa ngokokuqala, kwaye baqala ukuziqasha kwiindawo ezincinci zokusela kwiiKobe eziseduze ukuze babone ukuba abantu baya kubathabatha. Njengoko ndikhankanywe ngaphambili, iinkqubo zabonwa ngokuyinxalenye yendlela yokuphila ehamba phambili kwaye iyakhankanywa ngokubanzi kubutyebi abacebileyo.
Yonke into yatshintsha emva kokuba abanikazi beqela beblaki bevela kuloo ndawo bathenga oomatshini beendawo ezivulekileyo kwindawo. Ukufuna ukutshitshiswa njengoko ilizwi lisasazeka ngokukhawuleza, kunye nemiyalelo ezayo yonke indlela esuka eTokyo. Amanye amashishini ayenokubeka eceleni iindawo ezizeleyo ukuze abathengi bakwazi ukuqasha amabhithi omculo. Ebhekiselwe njengeibhokisi ze-karaoke, ezi ziko zinikezela ngamagumbi amaninzi kunye ne-bar yokuphambili ye-karaoke.
I-craze isasaza nge-Asia
Ngama-90, i-karaoke, eyayithetha ngesiJapane ithetha "i-orchestra engenanto," yayiza kuba yindawo epheleleyo e-Asia. Ngeli xesha, kwakukho izinto ezintsha ezinjengezobugcisa bezandi eziphuculweyo kunye nabadlali bevidiyo be-laser disc abavumela abasebenzisi ukuba bacebise amava kunye neengoma eziboniswe kwiskrini - konke ekuthuthukisweni kwamakhaya abo.
Ngokuphathelele i-Inoue, akazange enze njengokuba baninzi abanokulindela ngenxa yokuba benze isono sokukhawuleza ukuba bangenzi umzamo wobugcisa bakhe . Kucacile ukuba oku kwamvulela abachasene nabo ababezoyikhuphela ingcamango yakhe, eyayinqumla inzuzo yenkampani. Ngenxa yoko, ngelixesha abadlali be-laser disc baqala, ukuveliswa kwe-Juke 8 kuye kwaphela.
Oku nangona zenzele iimveliso ezingama-25,000.
Kodwa ukuba ucinga ukuba uyaziva ukuba uyazisola malunga nesigqibo oya kuphazamiseka. Kwintetho epapashwe kwi-Topic Magazine kwaye iphinda iphrintiwe kwi-Intanethi kwi-Appendix, i-intanethi "kwincwadi yokuhlola kunye nembali elandelelanayo, i-Inoue yaqiqa ukuba ukukhuselwa kwephepha lobungakanani bekumele kuthintele ukuveliswa kwetheknoloji.
Nantsi ngaphandle ngaphandle:
"Xa ndenza iJuke 8s yokuqala, umyeni womyeni wandincenga ukuba ndiphume i-patent. Kodwa ngelo xesha, ndandicinga ukuba akukho nto iya kuvela kuyo. Ndandithemba nje ukuba indawo yokusela kwindawo yaseKobe yayiza kusebenzisa umatshini wam, ngoko ndingahlala ubomi obukhululekile kwaye ndinezinto ezinokuyenza nomculo. Uninzi lwabantu alukholelwayo xa ndithetha oku, kodwa andicinge ukuba i-karaoke ingakhula njengoko yenzayo ukuba kukho i-patent kumatshini wokuqala. Ngaphandle koko, andizange ndakhe le nto ukususela ekuqaleni. "
Okona kuncinane, nangona kunjalo, Inoue sele iqalile ukufumana ukuqatshelwa ngokufanelekileyo njengenguyise womatshini we-karaoke, emva kokuba ibali lakhe libikwe yiThansan TV. Kwaye ngo-1999, umshicileli we-Asia we-Time Magazine wanyathelisa iprogram ethiwa "phakathi kwezona ziNkokeli zase-Asiya eziPhambili."
Kwakhona waqulunqa umshini wokubulala. Ngoku uhlala entabeni eKobe, eJapan, kunye nomkakhe, intombi, abazukulu abathathu kunye nezinja ezisibhozo.
Imbali yeeFowuni zeeSelfowuni
Yakha imisebenzi yakho yokubhukuda ukusuka kuma-1,500 ukuya kuma-3,000 wamitha
Abathunywa abathathu: IPararotti, iDomingo, neCarreras
Ukuphanda i-Ancestor yakho yeMfazwe
Imihla yokuPhucula iVeki yeVeki yokuPhila kweMgqibelo
Inani lamazwekazi kwiMhlaba kunzima ngakumbi kunokuba ucinge
Amazwe eLungu leZizwe eziManyeneyo
Imisebenzi Yentetho ye-Impromptu
Hermes Greek Greek
Iimpapasho ezi-13 eziphambili zebhola zebhola
I-Architecture yaba njani umsebenzi welayisenisi?
IYunivesithi yaseMaldan e-Eastern Shore Admissions
Umyinge we-TOEIC izikolo ngo-Age, iGender, Izwe, kunye neMfundo
IziFulentshi eziMandla eziPhambili: Indlela yokuzifakela
Ubukhoboka kunye nolwazi phakathi kweCherokee
UCatherine waseAragon: Into ebalulekileyo yeNkosi
Iinkcukacha zeTegetry Trial Teaching
UAbraham Darby (1678 - 1717)
Iibhasi zexesha elide (kunye nezinye iinqwelo zeThuthi)?
Imithetho yeOlimpiki ebalulekileyo neMithetho yeTable Table